Darawalada Bajaajta Guriceel oo hal arrin darteed uga tagay Shaqooyinkooda – SOMA: Somali Media Association
Dhallinyarada kaga dhex shaqeysa moota bajaajta magaalada Guriceel ee Galgaduud ayaa dhibaato kala kulma bacaad badan oo buuxiyey wadooyinka ay ku wadaaan.
Dhibaatada wadoyinka oo aysan cidna garab ka siin ayaa sababtay in Bajaajleydu sameystaan gudi bajaajleyda dhexdooda ah si ay wadooyinka xal ugu helaan Sida uu ii sheegay Godomiyaha Gudiga Bajaajleyda Caraaye Mire Cilmi.
Waxa uu tilmaamay in waqti badan oo ay ku sameyn lahaayeen dakhli fiican uu kaga lumo waddooyinka bacaadka ah, sidoo kalana ay jirto in maamulka ay gaarsiiyeen cabashooda, balse uusan kasoo jawaabin.
Caraaya waxa uu sheegayaa in ka dhallinyaro ahaan ay iska soo saareen dhowr qof oo maalintiiba ka sameeya wadooyinka in ay Bacaadka ka kala yareeyaan, si ay u fududaato maristeeda.
“Waxaa nagu dhilayay inaan aas aasno gudi moota bajaajley ah dhibaatada wadooyinka, ma jiro cid wax nagala qabaneysa Canshuurna waa nagala qadaa, anagaa istusnay inaan isku kaashano waana u istaagnay wadooyinka qaarbaan Bacaadkii ka gurnay, Qaar jaay baan ku shubnay Qaarna waan rusheynay. Hadana waan ku tala jirnaa inaan sii wadno waxaana codsaneynaa in wax nagala qabto oo nagala saacido. Ayuu yiri.”
Bacaadka iyo cariiriga oo isku biirsaday wadoyinka iyo suuq fiican oo aan jirin ayaa sababtay qaar ka mid ah dhallinyarada mootada ku shaqeysta iney iska iibiyaan qaarkood, moota bajaajta oo ay galaan ganacsi kale oo ay ku abuurtaan lacagihii ay ka heleen.
Mowliid Xasan Nuur waxa uu Saddex bilood kahor iska iibiyay moota bajaaj uu lahaa, isagoo markaa kaddibna furtay Sandaqad lagu iibiyo alaabaha bajaajka.
Wuxuu ii sheegay in dhibaatada wadooyinka ee magaalada ka jirta mootadu ku baaba’ayso waxna aysan ka so baxeyn taasna ay ku dhalisay inuu iska iibiyo, mararka qaarka ay dhaceysay in xitaa maalintii aysan soo saarin lacagaha biilka ee uu reerka u geeyo.
“Waxaan iska iibiyay mootadeydi dhibaatada bacaadka iyo wadooyinka magaalada waxba kama soo baxayaan mootada unbaa ku dhamaaneysa. Waxaan kala kulmay dhib farabadan iyado qof kuu saaran yahay ayey bacaadka kaa galeysa qoraxduna ad u kulashahay waa inad bariso dadka ila riixa dhahdo. Mootada unbaa ku dhamaaneysa waxba kama so baxayaan waxaan go’aansady in iska iibiyo oo aan wax kale raadsado waxaana furtay sandaqadan waxaan iibiyaa alaabaha lagu dacay tiro. ayuu yari.”
Maamulka Degmada Guriceel ayaa ka warhaaya dhibaatada ay sheeganayaan darawalada Bajaajta, waxaana ay sheegeen in ay xallin doonaan caqabadaha jira.
Cabdi Kariin Ugaas oo ah Agaasimaha Maaliyada Guriceel ayaa SOMA u sheegay in maamulku ka shaqeyay wadada laamiga ah iyo wadooyin xirin oo la furay iyo kuwo badan oo lagu howlan yahay.
Waxa uu tilmaamay in dadka Mootada ku shaqeysta ay bixiyaan canshuur billa ah, xaqna ay u leeyihiin in ay helaan wadooyin ay rafaad la’aan ugu shaqeystaan, balse Maamulka uu dadaal isugu geyn doono wax ka qabashada dhibaatooyinka hadda taagan.
” Wadooyin la furay wey jiraan oo waxaan wax ka qabanay laamiga oo uu cariiri kajiri jiray iyo in wado xirmay. Majiraan bajaajley cabasha ah oo inoo timid ka maamul ahaan inkastoo anaan ahayn maamul awood u leh inuu wax ka qabto baahida guud hadana waxaan diyaar u nahay in aan wax kala qabano dhibaatada jirta hadana waan ku howlanahay inaan wadooyinka bacaadka ah ee bajaajtu ku dhiban tahay aan wax kala qabano bajaajta madaama wax badan ay magaalada ku so kordhisay” ayuu yiri.
WQ: Cabdi Qadar Xasan oo Radio Galgaduud ka tirsan.